Umthandazo kuSanta Benedict ngemali Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Ukuba ngalo mzuzu uziva unqwenela ukufumana imali singaya kwi Umthandazi oyiNgcwele uBenedict wemali, Ngubani onokusikelela bonke oovimba bethu ukuze singaze siswele loo mali iyimfuneko ebomini bethu.
Xa sifuna ukuthandaza kwi-Patron Saint yeMali kufuneka sifunde ngononophelo, songeze izicelo kunye neengcinga zethu.
1 Ukuzinikela emthandazweni weMali kaSanta Benedict
2 Isixelela ntoni ibhayibhile?
3 Umthandazo kuSanta Benedict ngemali:
4 Kutheni uthandazela uMoya oyiNgcwele uBenedict ngemali?
4.1 Izizathu zokwenza le mithandazo
Ukuzinikela emthandazweni weMali kaSanta Benedict
Lo mthandazo uthathwa njengeyona nto isebenzayo ukuba nemali kunye nesixhobo sikaThixo esinokusinceda xa sineengxaki zemali. Yonke imihla amakholwa amaninzi ayazibandakanya aqinisekisa ukusebenza kuka-Saint Benedict ukuze asincede kumba wemali.
Okwangoku, uluntu yonke imihla luxhomekeke ngakumbi kwimali nakwizinto ezinokuthengwa, ngakumbi ukuba uhlala kwizixeko ezikhulu okanye kwiindawo edolophini Apho kufuneka isixhobo esithile semali, nokuba yimali okanye imali yedijithali ukuze ubenakho ukufikelela kwiinkonzo ezisisiseko njengokutya kunye nokuhlawulwa kweenkonzo ukuze ufumane uxolo lwengqondo.
Ngaphandle kwento yokuba abantu abaninzi belichaza ngendlela engeyiyo ilizwi likaThixo kwaye beveza iingcinga eziphosakeleyo ezinjengokuthi uThixo akayithandi imali, kufanele kucaciswe ukuba uThixo uyayicaphukela inkanuko, hayi iMali, kuba isiphelo masibe yintlalontle yabanye hayi intlalontle yomntu ummelwane.
Isixelela ntoni ibhayibhile?
Ibhayibhile ngokuba zizibhalo ezingcwele zethu ezingqina oku kuchazwe ngasentla kwiNtshumayeli Isahluko 5, ivesi 10: “Umntu othanda imali akaneliswa yimali; kwaye nabani na othanda ukuba nokuninzi akathwali siqhamo. Kwanako oku kungamampunge."
Kwisicatshulwa esingcwele kuLuka Isahluko 12, iVesi 15: kuyachazwa njengoko abantu belumkiswa ukuba bangaqhutywa kukunyoluka kuba esi sesinye sezilingo ezininzi esilingwa lutshaba ngazo; "Lumnka! Walumkisa abantu. Uthe ke kubo, Lumkani, nizilinde ngasekubaweni; kuba ubomi bomntu abumi ngabuninzi bempahla anayo.
Kungenxa yoko le nto sinokuthi eBhayibhileni ayikaze ithi iMali ayilunganga, ithi kuphela ukubawa kubi kwaye ukubeka imali kuThixo kuyacaphukisa. Ukuqhubeka nento ebhekisa "kumthandazo ku-Benedict oNgcwele wemali" uthathwa njengowona mmangaliso ngokwemali, nangona kunjalo, kufanele kucaciswe ukuba imali ayiluthengi ulonwabo. Ukwazi eminye imithandazo yiya Umthandazo kuMateyu oNgcwele.
Ulonwabo sisipho esivela kuThixo asinika sona ebomini bethu ngezenzo zethu ezilungileyo zokunceda abanye, ngaphandle kokwazi ukuba imali iyimfuneko, ayize ize phambi kweNkosi yethu. KwiZibhalo Ezingcwele kuTimoti Isahluko 5, ivesi 8: "Ukuba nabani na akabalungiseleli abo bangabakhe, ngakumbi abo bangamalungu endlu yakhe, ulukhanyele ukholo kwaye mbi ngaphezu kongakholwayo" oko kukuthi Yithi uThixo uyayamkela into yokukhangela imali kwaye uyasimema ukuba sincedise ngayo ekunakekeleni eyethu neyabanye.
Umthandazo kuSanta Benedict ngemali:
Nkosi Somandla Bawo, Kumkani wezulu nomhlaba. Ndiza kuwe kukudumisa ndikuzukise ukuze undincede kule ngxaki.
Nkosi ndiziva ndilahlekile kwaye andifumani mpendulo kwiingxaki zam. Ndikhanyisele ngobulumko ukuze ndilandele umendo, ndifuna impendulo yemali kunye nemali yam. Andizanga kuzokucela ummangaliso okanye imali yemvula. Ndinike izixhobo zokufumana umsebenzi omninzi kunye nemali endiyifunayo, kuba ndingaboniyo ndiphose amathuba abalulekileyo. Ndiyanibongoza ngesisombululo, ndincede ngemali yam ukuze ndikwazi ukuzixhasa kunye nosapho lwam. Thumela uSanta Benedict enze utshintsho ebomini bam. ndiyazi amandla yokuthanda ukuba ndifuna ukuvusa oomoya kwaye ndiqhubeke.
Susa kum bonke ubuvila kunye nosizi olungafunekiyo. Ndifuna ukuba ngcono, ndincede abanye xa beyidinga. Sikelela isonka semihla ngemihla kwaye wandise inceba efanayo naleyo uYesu wayenza ngentlanzi. Saint Benedict, wena ohlala ukhusela kwaye usecaleni lam. Andikuceli ubunewunewu, iimoto okanye ubucwebe, ndifuna impilo-ntle kuphela, isonka sam semihla ngemihla, ukuze ndikwazi ukunxiba mna kunye nosapho lwam.
Yonke imihla ndiziva ngathi uthando lwakho lubonakala phambi kwam kwaye luyandomeleza. Bawo endimthandayo Ndiyazi ukuba undithanda ngaphezu kokuba ndikuthanda. Ngaphandle koku ndiyazi ukuba ndisilele ngenxa yokukuthandabuza, ngenxa yesi sizathu ndifuna ukusebenzisa lo mthandazo ukusondela kuwe.
Benedict oNgcwele, ndicela undimamele, ndizimisele ukusebenzisa isidima sakho ukuze uzive uzolile kwaye ulinde. Ke ngoko ndiva uvuyo lwezandla zakho ezintle ezisebenza kum nakwimeko yam yezemali. Enkosi Nkosi ngokumamela imithandazo yam kwaye undenza ndibone ngaphaya kokungenakwenzeka. Nkosi yam, ndiyayihlonipha intando yakho kwaye ndiyazi ukuba ixesha lakho liphelele. Yonke into inesizathu sokubakho kwaye ndiyakuthemba. Amen.
Kutheni uthandaza Umthandazo kuSanta Benedict ngemali ?
Baninzi abantu abanokholo oluncinci abakholelwa ukuba banamandla okwenza izigwebo ngamandla kaThixo kunye nabaNgcwele bakhe, okwenza ukuba kube kholelwa ukuba kukho ungenelelo olungcwele; Ukuqinisekisa ukuba imali ifunwa ngomsebenzi kodwa hayi ngokuthandaza.
Nangona kunjalo, uSanta Benedict unawo amandla obabalo lukaThixo lokubonelela ngoncedo olukhethekileyo ngokwemali efumaneke kakuhle, ngokucacileyo ngesicelo sokuqala esisenzayo sokufumana imali, ayizukuwa ngokukhawuleza.
Abantu abaninzi bajonge ku-Saint Benedict ukuze bafumane inkxaso kwaye bathandaze umthandazo wentabalala yemali ukuze ubulumko kunye neshishini elilungileyo bafumane imali abayifunayo.
Izizathu zokwenza le mithandazo
Ukutsala imali esiyifunayo
Fumana imali yokuhlawula
Kwaye ukuze singaze siswele imali
Ukwenza imithandazo yethu kwi-Saint Benedict, kufuneka kukhanyiswe ikhandlela eliluhlaza okanye elimhlophe.